‘वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ऐतिहासिक कदम चालिएका छन्’ | Madhyanhadaily.com
‘वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ऐतिहासिक कदम चालिएका छन्’
हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समिति
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रगतिशील मञ्च नेपालको निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निवर्तमान द्वितीय उपाध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री खरो स्वभावको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका रुपमा परिचित छन् । फ्युचर स्टार म्यानपावर प्रा.लि. सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा आउनु अघि भारतीय सेनामा काम गरेका उनी पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न डटेर खट्ने र परिआए भिड्नसमेत पछि नपर्ने उनको स्वभाव छ ।
उनको यही खरो स्वभावलाई राजनीतिमा फरकधार बोक्ने व्यवसायीहरुले समेत रुचाउने गरेका छन् । तर आफ्नो यही खरो स्वभाव कतिपय आफ्नै भन्नेहरुलाई अपाच्य लागेका कारण आफूलाई कहिले काँही घाटा भइरहेको व्यवसायी पाण्डेको भनाइ छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एमाले युवा नेता गोकर्णराज बिष्ट मन्त्रीका रुपमा आएपछि भएका कतिपय निर्णयहरुले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धराशायी हुने भयो भन्ने कतिपय व्यवसायीहरुबाट चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । तर, यस विषयमा भने पाण्डेको फरक मत रहेको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा व्यवसायी पाण्डेसँग मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका नविनकुमार श्रेष्ठ र रेशमराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लिएका कतिपय निर्णयहरुले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धराशायी हुने भयो भन्ने कतिपय व्यवसायीहरुबाट गम्भीर चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्, यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
मन्त्रालयमा नेकपा एमालेको सचिवको जिम्मेवारी बहन गरिरहनुभएका युवा व्यक्तित्व गोकर्णराज बिष्ट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भई आएपछि केही साहसिक निर्णयहरु भएका छन् । नेपाल आउने डिमाण्डको अनिवार्य कुटनीतिक नियोग प्रमाणीकरण र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुमाथि चर्को आर्थिक शोषण गरिरहेका केही सिण्डिकेटका सञ्चालकहरुमाथि भएका कारबाहीहरु नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका ऐतिहासिक कदमहरु हुन् । विगतमा यस क्षेत्रमा कुनै ठोस र साहसिक निर्णय हुन नसकेका कारण जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने एक खालको सन्देश गइरहेको थियो । तर, मन्त्रीका यी साहसिक कदमले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सधैँभरी एकैनासको अवस्था रहदैन भन्ने सन्देश आएको छ । यसलाई सही तरिकाले बुझ्न र ग्रहण गर्न नसक्नेहरुले अब बर्वादै भयो, आकाशै खस्यो जस्तो गरी प्रचार गरिरहेका छन् । वास्तवमा भएका यी निर्णयका लागि माननीय मन्त्री ज्यूलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ ।
तपाइहरु आफू एमाले निकट व्यवसयीको रुपमा चिनाई रहनुभएको छ, तर मन्त्रीका यी निर्णयमा तपाइहरुसँग कुनै परामर्श नै गरिएन भन्ने सुनिन्छ नि !
यो कुरा सरासर गलत हो । केही साथीहरुलाई सस्तो प्रचारमा रमाउने बानी परेको छ । भएका सानातिना भेटघाटलाई पनि व्यापक रुपमा प्रचार गर्ने उहाँहरुको बानी नै छ । तर हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौं । मन्त्रीज्यूसँग एकल र सामुहिक गरेर पटक–पटक भेट भइरहेको छ । उहाँले चालेको सही कदमहरुको हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गरिरहेका छौं । उहाँ अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको जेनेभामा आयोजित बैठकमा भागलिन जानुअघि हामीले भेटेरै धारणा राखेका थियौं । उहाँले स्वदेश फर्किएपछि व्यवसायीहरुसँग लामो छलफल गर्ने भनिरहनु भएको छ । हामी त्यो छलफलको प्रतिक्षामा रहेका छौं । वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसक्ने र स्वरोजगार सिर्जना पनि गर्न नसक्ने नेपाली युवाहरुको जिविकाको विकल्प बनेको छ । नेपाल राष्ट बैकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि वैदेशिक रोजगार नेपालको सन्दर्भमा अति महत्वपूर्ण छ भन्ने सबैले बुझेको तथ्य हो । यस्तो अवस्थामा मन्त्री र व्यवसायीबीच छलफल नै नहुने भन्ने विषय नै हुँदैन । मन्त्रीले यस क्षेत्रमा लागेको जुनसुकै विचार राख्ने सबैसँग छलफल गरिरहेको मैले पाएको छु ।
व्यवसायीहरुमा यतिबेला धरौटी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ना उत्पन्न भएको छ, तपाइहरुले मन्त्रीसँग भएको छलफलका क्रममा धरौटीका विषयमा कस्तो संकेत पाउनु भएको छ ?
यस विषयमा मन्त्रीले कुनै तत्कालै कुनै निर्णय लिनु हुँदैन भन्ने मैले बुझेको छु । अघिल्लो सरकारको पालामा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा ईजाजतपत्रवाला अर्थात म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी हालको ७ लाख नगदलाई बढाएर एक करोड पु¥याउने भन्ने कुरा तयार भएको विधेयकको मस्यौदाबाट थाहा भएको हो । त्यसपछि त्यसमा केही संशोधन भएको छैन । हाल म्यानपावर कम्पनीको धरौटी पाँच करोड होस् भन्ने चाहना राख्नेले मन्त्रीले धरौटी बढाएर पाँच करोड पु¥याउँदै छ भनि प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसैक्रममा ४ करोड होस् भन्न चाहनेले मन्त्री ४ करोडको पक्षमा छन् भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । कतिपय तीन करोड, कोही दुई करोड र कोही एक करोडको पक्षमा देखिएका छन् । म चाहिँ धरौटी बढाएर यो व्यवसायलाई सीमित पूँजीपतिहरुको हातमा सुम्पने काम मन्त्रीले गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु ।
केही दिन अघि बसुन्धरामा व्यवसायीहरुको भेला बोलाएर सबै कुरा मिलाइनेछ, चिन्ता लिनुपर्दैन भन्नु भएको थियो, यस विषयमा व्यवसायी ढुक्क भएर बस्न मिल्छ त ?
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समति यस क्षेत्रका आम व्यवसायीहरुको साझा संस्थाका रुपमा रहेको छ । हामी विभिन्न राजनीतिक विचार आस्था राख्ने भएपनि समाजमा नितान्त व्यवसायीहरुका समस्या समाधान र समाज सेवाका विषयमा छलफल गर्ने गर्दछौं । वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा विभिन्न खालका कुराहरु उठेपछि त्यसमा छलफल गरी अस्पष्ट भएका विषयमा स्पष्ट हुने र छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई पनि उपयुक्त लागेको सुझाव सल्लाह दिने भनि भेला बोलाएका हौं । उक्त भेलामा म्यानपावर व्यवसायीहरुले रचनात्मक सुझाव राख्ने बाहेक सरकारको आलोचना पनि गरेनन् । त्यस भेलामा मैले पनि त्यस्तो कुनै प्रहरीको वा मन्त्रीको सेटिङ मिलाउने कुरा पनि गरेको छैन । नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बुझ्न नै नचाहने कतिपय साथीहरुले अनर्गल प्रचार गरेको पाएँ । त्यस्ता प्रचारमा कुनै सत्यता रहेको छैन ।
भेलामा के–कस्ता विषयमा छलफल भएको थियो त ?
कतिपय साथीहरुले म्यानपावर कम्पनीमा प्रहरीले छापा हान्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । कतिपय व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारका लागि गन्तव्य देशमा रहेको दूतावासले ‘कामदार माग गर्ने कम्पनीको अवस्था बुझेर मात्र माग प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने’ प्राबधानले दूतावासका केही कर्मचारीले महिनौसम्म माग प्रमाणीकरणको फाइल सदर नगरिदिन सक्ने आशंका राख्नुभयो । आयोजकका नाताले जवाफ दिने क्रमममा मैले सबै व्यवसायीहरुलाई नियम कानून अनुसार चल्नुस्, ढुक्कसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सबै व्यवसायीले पाउनुहुन्छ भन्ने धारणासम्म राखेको हुँ । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई कसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ ? म्यानपावर व्यवसाय दर्ता गर्दा हाल राख्ने धरौटी कसरी यथावत राख्न सकिन्छ ? म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा लिन पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कसरी मिलाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । तर, प्रायःजसो व्यवसायीले सरकार र श्रम मन्त्रीको आलोचनाबाहेक केही गरेनन् भन्ने आयो त्यो वास्तविकता होइन ।
Posted by madhnews onJun 14 2018. Filed under Slider, अन्तर्वार्ता, वैदेशिक विशेष फिचर. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
प्रवासी नेपाली एकता मञ्चमा तिवारी
‘ट्रक व्यवसायीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्छु’
निजगढ विमानस्थलबारे सांसदको धारणा, रुख कटान नगर्न र स्रोत सुनिश्चित गर्न माग
‘सदाचार पद्धतिलाई व्यवहारमा उतारौ’
काठमाडौं–तराई–मधेश दु्रतमार्गबारे नेपाली सेना बोल्यो, ‘निर्धारित समयमै निर्माण हुन्छ, शंका नगर्नुस्’
संसदीय समितिले पायो सभापति, चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी
घिमिरेले सम्हाले अख्तियारको जिम्मेवारी